Taliska nabadgelyada waddooyinka oo laga hirgelinayo dhismo cusub “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Taliska nabadgelyada waddooyinka oo laga hirgelinayo dhismo cusub “SAWIRRO”
Taliska ciidanka Nabad gelyada waddooyinka ee Taraafiko ayaa laga hirgelinayaa dhismo cusub oo ay ku shaqeynayaan ciidanka taliska, kaasi oo qeyb ka ah qorshaha dhiso dalkaaga oo uu Madaxweynuhu ku baaqay kal hore.
Dhismahan oo ah mid si iskaa wax u qabso ah ayaa waxa ku dhisaya ciidanka booliska, taasi oo bilow fiican u noqoneysa dib u dhiska hay’adaha dowladda.
Taliyaha ciidanka Nabadgelyada waddooyinka Gaashaanle Sare Cali Maxamed Cali oo la hadlayay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay inay sii wadayaan doorka uga aadan dib u dhiska xarunta.
Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Sareeyo Guuto Mukhaar Xuseen Afrax ayaa ugu baaqay shacabka inay ka qeyb qaataan dib u dhiska dhismaha cusub ee laga hirgelinayo xarunta ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee taraafiko.
33 maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dilay nawaaxiga Xarardheere